09. Ngwe Saung (3Days –2Nights ) – Holiday Channel
Home>Trips>09. Ngwe Saung (3Days –2Nights )
09. Ngwe Saung (3Days –2Nights )
ငွေဆောင် (3Days –2Nights )
Day 1 – ရန်ကုန်မှ ညပိုင်းတွင် ငွေဆောင်သို့ ထွက်ခွါပါမည်။
Night Over – ကားပေါ်
Day2– နံနက်စောစောတွင် ငွေဆောင်သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေဆောင်ရှိ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော စားသောက်ဆိုင်တွင်နံနက်စာကိုဧည့်ခံကျွေးမွေးပါမည်။ပြီးနောက်Hotel သို့Check-In ဝင်ပါမည်။ Hotel တွင်အနားယူပြီးနောက် ချစ်သူကျွန်းသို့သွားရောက်လည်ပတ်ကြပြီး အလှဓါတ်ပုံများကိုပါ ပျော်ရွှင်စွာရိုက်ကူးကြပါမည်။ နေ့လည်စာကို Hotel တွင် Set Menu ဖြင့်ဧည့်ခံပါမည်။ ထို့နောက် ငွေဆောင်၏ ကမ်းခြေအလှကို ကြည့်ရှု့ခံစားပြီး ပျော်ရွှင်စွာရေကစားကြပါမည်။ ညစာကို Hotel တွင် SeaFood များဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံကျွေးမွေးပါမည်။ ညပိုင်းတွင်မီးပုံပွဲများကျင်းပ၍Barbecueအကင်များသုံးဆောင်ပြီး ကာရာအိုကေသီဆိုခြင်းများဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာသီဆိုကြပါမည်။
Night Over – Sunny Paradise hotel (or) similar
Day3- ဟိုတယ်တွင ်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြးီ နောက် ငွေဆောင်မှရန်ကုန်သ ို့ပြန်လည်ထွက်ခွာပါမည်။ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ခေတ္တရပ်နား၍ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီး ရိုးရာအရောင်းဆိုင်ခန်းလေးများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှု့၍ ပျော်ရွှင်စွာ ဝယ်ယူကြပါမည်။ ပြီးနောက် ရန်ကုန်သို့ဆက်လက်၍ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပါသည်။